အမေဇုံ Rekognition နှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစည်းရေးမှတဆင့် Insys ဗီဒီယို Technologies က Automation Celebrity သတ်မှတ်ချက်နှင့်မသင့်လျော်အကြောင်းအရာထောက်လှမ်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Insys ဗီဒီယို Technologies က Automation Celebrity သတ်မှတ်ချက်နှင့်အမေဇုံ Rekognition နှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစည်းရေးမှတဆင့်မဆီလျော်သောအကြောင်းအရာထောက်လှမ်းခြင်း
Full-featured OTT ပလက်ဖောင်းများအတွက်စက်သင်ယူမှုအသစ် option ကိုအသုံးပြုခြင်းကို manual ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲအထိခိုက်မခံအကြောင်းအရာထဲကနေအော်ပရေတာဒိုင်းလွှားကိုကြည့်ရှုကူညီပေးသည်နှင့်ရှာဖွေပိုကောင်းစေပါတယ်
မေလ 16, 2019 - Dübendorf, ဆွစ်ဇာလန်: Insys ဗီဒီယို Technologies က နာမည်ကြီးတွေနဲ့ဖမ်း-up, တီဗီပရိုဂရမ်အတွက်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကို၏ detection နဲ့ On-demand ကိုဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက်၏ automated ဖော်ထုတ်ခြင်းကို enable ပြုလုပ်င်း၏ပြည့်စုံသော, Over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ဗွီဒီယိုကိုဖြေရှင်းချက်မှအစွမ်းထက်အသစ်သောစွမ်းရည်များထည့်သွင်းထားသည်။ ကြည့်ရှုသူများသည်ဗလာနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအလိုအလျောက်အလံနှင့်မှုန်ဝါးနိုင်ပါသည်စဉ်ကြောင့်လူတစ်ဦးပေါ်လာသည်ရှိရာပြပွဲအတွက်အတိအကျကိုအမှတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနုပညာရှင်နှင့်ခုန် featuring ကလစ်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
OTT ဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများအစဉ်အဆက်အရင်ကထက်သူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုဖို့ပိုအကြောင်းအရာကိုကမ်းလှမ်းရန်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable ။ သို့သော်မရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာများ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုများဖန်တီးပေးပါတယ်။ စားသုံးသူတစ်ဦးကောက်ရိုးပုံထဲမှာပုံအပ်ရှာဖွေတာနဲ့တူနိုငျသောသူတို့စိတ်ဝင်စားသည်ဟုပြပွဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ, လိုအပ်ပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းအော်ပရေတာအားလုံးအကြောင်းအရာအထိခိုက်မခံပစ္စည်းအဘို့မိမိတို့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းကန့်သတ်နှင့်တွေ့ဆုံပေမယ့်ကလစ်ပ်၏သက်သက်အရေအတွက်ကကိုယ်တိုင် cost- နှင့်အချိန်-လက်လှမ်းသူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စေသည်သေချာရပေမည်။ သူတို့ပုံမှန်အား "Pre-ထုပ်ပိုး" On-demand အစီအစဉ်များနှင့်အတူအသေးစိတ် metadata ကို၏တူညီသောအဆင့်အထိမပါဝင်ပါဘူးအဖြစ်ဖမ်း-up, ကြည့်ရှုဘို့ linear လိုင်းများ၏အသံသွင်း, အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်။
အမေဇုံ Rekognition, အမေဇုံက Web Services က (AWS) မှအဖြေတစ်ခုနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစည်းမှုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, Insys '' OTT ပလက်ဖောင်းအတွက် features အသစ်နှစ်မျိုးလုံးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလိုအလျှောက်မှတ်မိလူများနှင့်အထိခိုက်မခံ content များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအော်ပရေတာရဲ့စာကြည့်တိုက်မှဆက်ပြောသည်။ အမေဇုံ Rekognition အရာဝတ္ထု, လူတွေ, စာသား, မြင်ကွင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများခွဲခြားသတ်မှတ်အဖြစ်မည်သည့်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုထောက်လှမ်းနိုင်မယ့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု-powered ဗီဒီယိုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရွယ်မှာဝန်ဆောင်မှုတိကျစွာတ္ထုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ detect လုပ်ဖို့နှင့်ဗီဒီယိုမှရွေ့လျားမှု-based အခြေအနေတွင် extract ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသောစက်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. Real-time ကိုဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်တယ်။
Insys '' ကြွယ်ဝတဲ့ Front-အဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကြည့်ရှုအထူးသဖြင့်နာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများပါဝင်သည်ကြောင်းပြပွဲသို့မဟုတ်သတင်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါရန်ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအသုံးချရန်။ အဆိုပါ Insys ကဗီဒီယိုပလေယာအတွက်ထပ်ပြန်ဖွင့်စဉ်ကအသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးချင်းစီ၏အမည်များကိုပြသနေစဉ်တစ်ဦးကအချိန်ဇယားထို့နောက်သူတို့ကိုအဲဒီလူတွေမြင်ကြပါတယ်မှာတိကျတဲ့အချိန်လေးကိုတိုက်ရိုက်ခုန်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ Insys ကစားသမား window ကိုလည်းအလိုအလြောကျဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာဖုံးကွယ်ဖို့ပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းဗီဒီယိုမှုန်ဝါးဖို့အော်ပရေတာ-controlled option ကိုအတူဗလာသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အတူမြင်ကွင်းများညွှန်ပြပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ဇယားအပေါ်အမှတ်အသားများဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကမသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကို detection နဲ့မှုန်ဝါးစေရန်စွမ်းရည်အော်ပရေတာကိုအလိုအလျောက်အကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှု၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တွေ့ဆုံသေချာကူညီဖို့" Insys CEO ဖြစ်သူ Krzysztof Bartkowski ကဆိုသည်။ "သူတို့ကလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ဦးရောင်းချသူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်တာဝန်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသားသမီးတို့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြည့်သေချာဘို့ငါတို့ toolset တိုးချဲ့။ ဤအတောအတွင်းဗီဒီယိုအတွင်းနာမည်ကြီးတွေနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းကြည့်ရှုသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အချိန်ပိုမိုပြုလုပ်စောင့်ကြည့်ရှာဖွေတာဒီထက်အချိန်ဖြုန်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်, ဝန်ဆောင်မှုပေး '' ပရိတ်သတ်များအတွက်အကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့နိုင်စွမ်းရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ "
Insys ဗီဒီယို Technologies ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် OTT ကိရိယာများ, နည်းပညာများနှင့်အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲငွေရရှိအောင်, ဖြန့်ဝေခြင်း, branded full-featured ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ apps များမှတဆင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရန်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကို enable ပြုလုပ်ဖြူတံဆိပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ InsysGO Insys OneChannel လိုင်းများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့တစ််ကြည့်ရှုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကယ်တင်စဉ် MVPDs နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး, 30 ရက်ပေါင်းသကဲ့သို့နည်းနည်းအများအပြားလိုင်းများလွှမ်းခြုံပြည့်စုံ OTT ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယင်း modular Insys OTT Toolkit ကို modular အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးပြီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် OTT ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ရန်ဖောက်သည်ဖွစဉ် Insys VoD, content တွေကိုပံ့ပိုးပေးအလွယ်တကူ On-demand ကြည့်ဘို့မိမိတို့ဗီဒီယိုကိုစာကြည့်တိုက်ပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Insys ဖြေရှင်းနည်းများ, နည်းပညာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.insysvideotechnologies.com.
AI အမေဇုံ Rekognition အမေဇုံက Web Services က ဉာဏ်ရည်တု AWS ပို့ခြင်း ဒြပ်စင် insys ဗီဒီယိုကိုနည်းပညာများကို insys + LIVE စက်သင်ယူ ML ဝယ်လိုအားအပေါ် OTT ပလက်ဖောင်း Rekognition လွှ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယို vod	2019-05-16
ယခင်: Dejero SMPTE ST 2110 များအတွက်ထောက်ပံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်